onlineakhabar.com: OMG !! यस्तो भिडियो जुन हेरेपछि तपाई अाँखामा अाँसु अवस्य अाउने छ
Entertainment, Video » OMG !! यस्तो भिडियो जुन हेरेपछि तपाई अाँखामा अाँसु अवस्य अाउने छ
OMG !! यस्तो भिडियो जुन हेरेपछि तपाई अाँखामा अाँसु अवस्य अाउने छ
यस्तो भिडियो जुन हेरेपछि जो कोहिको पनि अाँखामा अाँसु अाउनु स्वभाविक हुनेछ । हाल सामाजिक संजालहरुमा निकै भाइरल भएको भिडियो जसमा एक युवतिले ९४ बर्षकी अामालाई कुटपिट गरिरहेकी छन् । यो घटना अर्जेन्टिनाको बुनोस अाइरेजको हो । जुन घटना सिसिटिभीमा कैद भएका ले प्रत्यक्ष भिडियोमा देखिएको छ कि कसरी एक युवतिले ९४ बर्षकी अामालाई हातपात गरेकी छन् । यो सिसिटिभि क्यामरा नजिकका छिमेकीको गोप्य सुचनाका अाधारमा लगाइएको थियो ।
पडित बृद्द महिलाले कहिले पनि यसबारेमा आफ्नो परिवारसँग कुरा गरिनन् । जसको कारण थियो उनि अल्जाइमर रोग अर्थात बिर्सने रोगबाट पिडित थिइन् । महिला एउटा दया र मायाकी खानी हुन्छ भन्ने हामी सुन्दै अाएका छौ । तर यो भिडियो हेरेपछि तपाई अाफै सोच्नुहोस् कि यस्ता मान्छेलाई कस्तो सँजाय दिने ।
हेर्नुहोस् तपाई पनि उक्त भिडियो :
Tags : Entertainment Video